August 2016 - Ceelhuur Online
Dusmo-reeb iyo Guriceel Xabsi kor ka furan…. Qormo kooban
August 31, 2016 admin1867 Comments on Dusmo-reeb iyo Guriceel Xabsi kor ka furan…. Qormo kooban
Dusmo-reeb waa caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka Galmudug, iyo xarunta gobolka Galgaduud, Waa magaalo qadiimi ah, Waxa ay nasiib u yeelatay loolanka kooxo iska soo horjeeda oo isku haya awoodda gobolada dhexe. Hadda waxaa gacanta ku haya maamulka Ahlu sunna, oo muddo halkaasi kula dagaalamay ururka Alshabaab, iyo ciidamada dowladda oo ay isku hayeen […]
Wariye C/Xakiim Cumar Jimcaale oo geeriyooday
August 31, 2016 admin2382 Comments on Wariye C/Xakiim Cumar Jimcaale oo geeriyooday
Inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun Nafwalba waqtigeeda ma dhaafayso, dhammaan shaqaalaha shabakadda Ceelhuur Online waxa ay Tacsi u dirayaan Ehelkii iyo bahda Saxaafadda geerida Allaha u Naxaristo Wariye Abdihakim Omar Jimcale oo ku Geeriyooday isbitaal ku yaal Minnesota dalka Mareykanka oo waayahan uu ku xanuunsanaa. Samir Allaha ka siiyo dhamaan Asxaabta iyo Ehelka gaar […]
August 31, 2016 admin26912 Comments on Sawirro: Sanad guuradii 1-aad Galmudug oo laga Xusay Koofur Afrika
Munaasabad si heer sare ah loo soo Agaasimay oo ay soo qaban qaabiyeen Jaaliyadda Galmudug ee Dalka Koofur Afrika ayaa Xalay lagu qabtay Magaalada Johannesburg. Madasha ayaa waxaa ka soo qeyb galay qeybaha kala duwan ee bulshada, Jaaliyadaha Puntland iyo Koofur Galbeed ee Wadanka Koofur Afrika ku nool. Sidoo kale waxaa Xafladda Qadka Taleefanka uga […]
August 31, 2016 admin196
Qalin jebisaye maxaa xigey? Sida caadiga ah Ardaygu marka uu ku jiro waxbarashada qaasatan tacliinta sare had iyo jeer wuxuu maanka ku hayaa ama maskaxdiisa ka guuxeysa fikaradda ah qalijebin Kadib waxaad heli doontaa shaqo aad ku kasban doonto mushahar ku raali geliya. Balse runtu waxa ay timaadaa marka aad soo qalinjebiso ee aad soo […]
Somaliland oo Amar adag dul dhigay Suxufiyiinta Ajnabiga ah
August 31, 2016 admin183
War-saxaafeed uu ku saxeexan yahay wasiirka warfaafinta Maamulka Somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid ayaa lagu sheegay in ay marar badan dhacdo in Somaliland ay warbixinno maqal iyo muuqaalba leh, qoraallo iyo sawirraba ay ka diraan saxafiyiin ajaanib ah kuwaasi oo aan wax ogolaanshiyo ah ka haysanin wasaaradda warfaafinta. Wasiirka ayaa sheegay inuu amarkiisu si gaar ah […]
Dowladda oo dibada u qaadaysa dhaawacyadii Qaraxii Hotel SYL
August 31, 2016 admin2071 Comment on Dowladda oo dibada u qaadaysa dhaawacyadii Qaraxii Hotel SYL
Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Maxamed Xaaji Cabdinuur (Madeer) ayaa sheegay in dalka dibadiisa loo qaaday dadka dhaawacyadooda halista yihiin ee ku waxyeeloobay qaraxii cuslaa ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Wasiirka ayaa bogaadiyay howsha dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo dadaalka ay u galeen bad baadinta dadkii shalay ku dhaawacmay qaraxii shalay. Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay in si […]
Akhriso : Magacyada iyo Sawirada Raggii soo maleegay Qaraxii Waqooyiga Galkacyo
August 30, 2016 admin236
War-Saxaafadeed kasoo baxay Maamulka Puntiland ayaa lagu amray laamaha amaanka in ay gacanta kusoo dhigaan shaqsiyaad magacyadooda la xusay ,kuwaa oo lagu tuhmayo in ay wax ka maleegeen qaraxyadii lagu qaaday Gaalkacyo gaar ahaan xarunta gobolka Mudug. War-Saxaafadeed Waxaa lagu wargelinayaa dhammaan hay’adaha amniga ee Puntland in ay soo shaqsiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ee […]
Sawirro: Dufcaddii 16-aad oo maanta ka qalin jebisay Jaamacada Muqdisho
August 30, 2016 October 16, 2016 admin2703 Comments on Sawirro: Dufcaddii 16-aad oo maanta ka qalin jebisay Jaamacada Muqdisho
Dufcaddii 16-aad ee Arday oo Jaamacadda Muqdisho ka Qalin-jabiya, ayaa maanta Xaflad loogu sameeyay Muqdisho, taasoo ay ka Qayb-galeen maamulka, macallimiinta hawl-wadeennada kale ee Jaamacada, Waalidiin, Arday iyo marti-sharaf kale. Guddoomiyaha Guddiga sare ee Jaamacadda Muqdisho, Dr. C/raxmaan Macallin C/llaahi (Baadiyow) oo ka hadlay munaasabadda ayaa yiri. “Maanta xafladdaan aan joogo waxay ii leedahay laba […]
August 30, 2016 admin1732 Comments on Sawirro: Madaxwayne ku xigeenka Galmudug oo maanta Cadaado kula shiray duubabka dhaqanka iyo gudiga doorashada
Kulanka maanta uu madaxwayne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi, uu layeeshay odayaasha dhaqanka ee Ergada soo xulaya iyo gudigayada doorashooyinka heer gobol iyo heer Federaal ayaa looga hadlay dar dar gelinta hawlaha doorasho ee ka bilaabanaya magaalada Cadaado. Kulanka ayaa sidoo kale wxaa qeyb ka,ahaa saraakiil ka socotay Milatariga Soomaaliya iyo wasaaradda amniga Galmudug […]
August 30, 2016 admin23410 Comments on Maareeye “Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda oo aniga ku jiro baa dhaawacyo fudud soo gaaray”
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir oo goor dhow la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa cambaareeyay qarax ismiidaamin oo ka dhacay inta u dhaxeysay Hotelka SYL iyo Ilinka laga galo Madaxtooyada. Maareeye ayaa sheegay in Hotelka uu ka socday labo shir, isagoo xusay in Ciidamada ammaanka ay illaa 500mitir rasaas ku fureen gaariga. “Aniga Hotelka ayaa […]